Date My Pet » pamusoro 6 Zvikonzero Sei Cooking zviri Hot kuti Romance
"Nzira yomunhu mwoyo kuburikidza mudumbu rake."
Somunhu nokuzvidzora vaizviti Foodie, Ndaigona womuMutemo vakawanda zvikonzero, asi pano tiri pamusoro 6 zvikonzero kubika ndiye "inopisa,"Kunyanya yanhasi kudanana uye kuberekesana Chiitiko.
1. Cooking chinopa akakwana "yokuwana" nokuda dzorudo.
Kufanana nevakadzi vakawanda, Ndinofarira kuiswa wined uye vadya panguva chinoshamisira kumaresitorendi kuburikidza nhongo suitors sezvo chikamu zvava kupera nokupindana kwacho. asi, Ukama ichishanduka, pane chinhu chaizvo "dzapedyo" pamusoro musha cooked vaiita toga mumusha kwomunhu— pamwe chekenduru, yemimhanzi shoma, achipembera mano kurega vhudzi rako pasi sezvo mamiriro dzokwenyu. Arohwe cream munhu?
2. Cooking kumba kazhinji vakagwinya pane resitorendi achidya.
Pavaichidya panze, nguva zhinji zvokudya vari kupatsanurwa, akashanda vakapfuma uye fattening sauces, zvakakanyiwa namafuta rakawandisa mafuta, "Nakisa kadikidiki" uye pasina zvakakodzera kugadzirira vaya zvokudya mitemo uye zvokudya nezvimwe zvinhu. Dining panze kunogona kudhura nzira dzinopfuura imwe.
3. unyanzvi Culinary kuwedzera mukadzi upi kana murume iyeye tangazve.
Funga nezvazvo sezvo kuwedzera kwako "Blue Book" kukosha kudanana pamusika.
Pano ndizvo achangobva murume munyori akanyora: "Nhamba yevakadzi mazuva aya kuti vanobvuma pachena havagoni kubika zvinoshamisa chose. Kana mukadzi anoti iye haagoni kubika, wokutanga pfungwa runouya yakawanda mupfungwa varume zvakanaka ndiye "sei gehena Unonzwa zvichengetedze uye sei ungapindura kukwanisa vanditarisire?"
4. Cooking Akakubvumidza kuzviraramira uye zvakawanda vakaziva somukadzi.
Hapasisina kumirira amai vako kuti kugadzira chaunofarira kudya, kana vachitarisira kuti yenyu munharaunda resitorendi zvichaitika neMuvhuro kuti zviripo, kana kuridza runhare kuti utore-panze; unogona kuchigadzira pachako!
5. Cooking nekutsausa zvose pfungwa.
Kubva dzinofadza aromas, meso-achifadza urongwa pamusoro ndiro, zvakasiyana-siyana mavara uye textures, kudenga. kuravira— yakanaka kudya kunogona kugutsa avo isu hanya nokuti vazhinji saka nhanho.
6. Cooking ndiyo nzira inofadza yokuti noukama.
Unogona kubika uye anogona saradhi. Feed mumwe, kana zvichida mugove nyaya uye tsika dzine chokuita Quick mhuri. Cooking kunoita munhu anzwe vasine uye vakagutsa. Uye kana iye chaizvo kwamuri, hausi waizozviita kuti sei kuita kuti anzwe?
Uye pane akanaka pano: Haufaniri kusaina nokuda culinary chikoro kana kubatwa kusingaperi kutongwa uye kukanganisa; pane zvakawanda paIndaneti kubika site zvinopa danho nedanho Tutorials kuwedzera kubika yako I.Q.!
Chimwe chinobatsira inzira kutenga cookbooks authored vana. Anopa zvikuru ashandurire kudzidza pamusoro kicheni chengetedzo, mureza zvokuyera, uye nyore kutevedzera Quick.
yeuka, kubika ari nzira huru huchakurukurwa "kupisa" uye kuteterera havi munhu ano!